Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 16 Petra | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 16 Petra
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Isaky ny misy izy ireo more ny mpampiasa amin'ity fizarana ity dia fantatrao misaraka de Ubuntu ary maka lalan-kely hafa. Ity misy torolàlana aorian'ny fametrahana azy ho an'ireo mpampiasa vao manomboka.
Hevitra vitsivitsy tokony hodinihina alohan'ny hanombohana ny torolàlana:
Tsy toy ny Ubuntu, Mint dia tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny ankamaroan'ny codec audio sy horonan-tsary, noho izany ny fanavaozana azy ireo dia tsy laharam-pahamehana.
Singa iray lehibe manandanja ihany koa izay apetraka amin'ny toerana misy anao dia Synaptic, mpitantana fonosana fanta-daza.
Raha manana ny kinova miorina amin'ny Ubuntu ianao, programa sy fonosana maro no mifanentana be amin'ireo fizarana roa ireo.
Rehefa nanazava ireo hevitra ireo izahay dia manohy manoratra zavatra vitsivitsy izay afaka manamora ny fiainana aorian'ny fametrahana ny kinova Linux Mint vaovao.
2 2. Ampidiro ireo mpamily fananana (carte vidéo, tsy misy tariby, sns.)
3 3. Apetraho ny fonosana amin'ny fiteny
4 4. Amboary ny endriny
5 5. Mametraka endritsoratra mametra
6 6. Mametraka programa hilalaovana
7 7. Mametraha plugins audio sy Equaliser
8 8. Hametraka Dropbox
9 9. Mametraha programa hafa
10 10. Vakio ny antontan-taratasy ofisialy
11 Jereo ny rafitray vaovao
Mety nisy fanavaozana vaovao nipoitra hatramin'ny nisintomanao ny sary, mba hahafahanao manamarina raha misy fanavaozana azo alaina avy amin'ny mpitantana fanavaozana (Menu> Fitantananana> Fanavaozana mpitantana) na miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
sudo apt-get fanavaozana && sudo apt-get fanavaozana
2. Ampidiro ireo mpamily fananana (carte vidéo, tsy misy tariby, sns.)
Ao amin'ny Menu Preferences> Drivers fanampiny dia afaka manavao sy manova (raha irintsika) ny mpamily tompon'ny karatra sary na fitaovana hafa izay miteraka olana.
3. Apetraho ny fonosana amin'ny fiteny
Na dia apetrak'ireo Linux Mint aza ny fonosana amin'ny teny Espaniôla (na zavatra hafa efa natoronay nandritra ny fametrahana azy) dia tsy nanao izany tanteraka. Mba hamerenana ity toe-javatra ity dia afaka mandeha amin'ny Menu> Préférences> Fanohanana amin'ny fiteny na amin'ny alàlan'ny fanoratana an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal:
sudo apt-mahazo mametraka fiteny-fonosana-gnome-en fiteny-fonosana-fonosana-kde-en libreoffice-l10n-en thunderbird-localale-en thunderbird-locale-en-en thunderbird-locale-en-ar
4. Amboary ny endriny
Betsaka ny fomba anaovana azy, ary afaka daholo izy ireo! Ao amin'ny http://gnome-look.org/ manana tahiry lehibe momba ny sary an-tsary, lohahevitra, fitaovana ary singa hafa izahay izay hanampy antsika "hijery" ny birao. Afaka mampiasa fitaovana 3 fanta-daza koa isika:
1. Docky, bara hitsin-dàlana sy fampiharana ho an'ny birao. Tranonkala ofisialy: http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki. Fametrahana: ao amin'ny terminal no anoratantsika: sudo apt-get install docky
2. AWN, bara fitetezana iray hafa, saika mpifaninana to docky! Tranonkala ofisialy: https://launchpad.net/awn Fametrahana: avy amin'ny manager Program.
3. Conky, fanaraha-maso ny rafitra iray izay mampiseho fampahalalana momba ny singa samihafa, toy ny RAM, fampiasana CPU, fotoanan'ny rafitra sns. Ny tombony lehibe dia misy "hoditra" maro an'ity fampiharana ity. Tranonkala ofisialy: http://conky.sourceforge.net/ Fametrahana: sudo apt-get install conky
5. Mametraka endritsoratra mametra
Raha ilaina ny mametraka azy ireo dia tsy maintsy soratantsika amin'ny terminal ireto baiko manaraka ireto:
sudo apt-mahazo mametraka ttf-mscorefonts-installer
Manaiky ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana izahay amin'ny alàlan'ny fitantanana amin'ny TAB sy ENTER.
Zava-dehibe ny fanaovana izany amin'ny terminal fa tsy avy amin'ireo mpitantana, satria tsy ho azonay ekena ny teny fampiasan'izy ireo.
6. Mametraka programa hilalaovana
Ho fanampin'ny trano famakiam-boky lehibe ananan'ny repositories dia manana ihany koa isika http://www.playdeb.net/welcome/, pejy iray hafa izay manampahaizana manokana amin'ny fanangonana lalao ho an'ny rafitra Linux amin'ny fonosana .deb. Raha te hankafy ny lalao Windows izahay dia aza kivy fa manana safidy hafa izahay:
1. Divay (http://www.winehq.org/) manome antsika ny sosona mifanaraka mba hihazakazaka tsy ny lalao ihany, fa koa ny karazana rindrambaiko natambatra ho an'ny rafitra Windows
2. PlayOnLinux (http://www.playonlinux.com/en/) loharano hafa iray izay manome antsika famakiam-boky afaka mametraka sy mampiasa rindrambaiko natao ho an'ny Windows
3. Lutris (http://lutris.net/) sehatra lalao novolavolaina ho an'ny GNU / Linux, loharano lehibe na eo aza ny fivoarana.
4. Winetrika (http://wiki.winehq.org/winetricks) miasa ho toy ny script izay manampy amin'ny fampidinana tranomboky ilaina amin'ny fampandehanana lalao amin'ny Linux, toy ny .NET Frameworks, DirectX, sns.
Ho an'ireo fandaharana rehetra ireo dia afaka mijery ny pejy ofisialiny avy izahay, na amin'ny mpitantana Linux Mint Programs na ny terminal. Toy izany koa, tena mamporisika anao izahay hamaky an'ity mini-tutor izay manazava ny fomba fametrahana sy fametrahana ny tsirairay amin'izy ireo.
7. Mametraha plugins audio sy Equaliser
Ny sasany amin'izy ireo, toa an'i Gstreamer na Timidity, dia hanampy antsika hanitatra ny katalaogin'ireo endrika manohana; samy hita ao amin'ny manager Programs na azo apetraka amin'ny alàlan'ny baiko sudo apt-get install. Soso-kevitra ihany koa ny hametraka pulseaudio-equalizer, afaka manome fikirakirana Pulse Audio mandroso sy manatsara ny kalitaon'ny feo. Raha hametraka azy dia hampiasa baiko 3 isika:
sudo add-apt-repository ppa: nilarimogard / webupd8 sudo apt-get fanavaozana sudo apt-mahazo mametraka pulseaudio-equalizer
8. Hametraka Dropbox
Amin'ny vanim-potoanan'ny 'rahona' dia mety manana kaonty Dropbox na Ubuntu One ianao .. azonao atao ny mametraka ny Ubuntu One sy Dropbox avy amin'ny Program Manager. Raha tsy izany, azonao atao ny mametraka Dropbox amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity: sudo apt-mahazo mametraka dropbox.
9. Mametraha programa hafa
Ny ambiny dia ny fahazoana ilay rindrambaiko tadiavinao isaky ny mila azy. Misy fomba maro hanatanterahana izany:
1. Ao amin'ny Program manager, izay ampidirinay avy amin'ny Menu> Administration, manana programa be dia be izahay ho an'ny asa rehetra mitranga amintsika. Ny mpitantana dia alamina amin'ny sokajy, izay manamora ny fikarohana ny zavatra tadiavintsika. Raha vantany vao hita ny programa ilaintsika, dia olana fotsiny ny fanindriana ny bokotra fametrahana ary ny fanoratana ny tenimiafin'ny Administrator; Azontsika atao mihitsy aza ny mamorona filaharana fametrahana izay hampiharin'ny mpitantana iray ihany.
2. Miaraka amin'ny Mpitantana fonosana raha fantatsika tsara izay fonosana tiantsika hapetraka. Tsy soso-kevitra hametraka programa avy hatrany raha tsy fantatsika ny fonosana rehetra ilaintsika.
3. Amin'ny alàlan'ny alalan'ny terminal (Menu> Accessories) ary ny fanoratana matetika sudo apt-get install + anaran'ilay programa. Indraindray dia tsy maintsy ampidirintsika eo aloha ny tahiry miaraka amin'ny baiko sudo apt-get ppa: + repository anarana; hikaroka programa misy ny console dia azontsika atao ny manoratra fikarohana mety.
4. Amin'ny pejy http://www.getdeb.net/welcome/ (Rahavavin'i Playdeb) izahay dia manana katalaogin'ny rindrambaiko tsara voaangona ao anaty fonosana .deb
5. Avy amin'ny pejy ofisialin'ny tetikasa raha manana dingana fametrahana hafa ianao.
Tolo-kevitra sasany amin'ny rindrambaiko:
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera: mpizaha Internet
Mozilla Thunderbird: mpitantana ny mailaka sy ny kalandrie
Birao malalaka, birao misokatra, birao K-Office: suite ao amin'ny birao
Comix: mpamaky tantara an-tsary
Okular: mpamaky rakitra marobe (ao anatin'izany ny pdf)
Inkscape: tonian-dahatsoratra sary
Gimp: mamorona sy manitsy sary
VLC, Mplayer: mpilalao horonantsary sy horonan-tsary
Rythmbox, Audacious, Songbird, Amarok - Mpilalao feo
Boxee: foibe multimedia
Caliber: fitantanana e-book
Picasa - fitantanana sary
Audacity, LMMS: sehatra fanovana feo
Pidgin, Emesené, Empathy: mpanjifa miresaka multiprotocol
Google Earth: tontolon'ny virtoaly malaza an'i Google
Transmission, Vuze: mpanjifa P2P
Bluefish: tonian-dahatsoratra HTML
Geany, Eclipse, Emacs, Gambas: tontolon'ny fampandrosoana ho an'ny fiteny samihafa
Gwibber, Tweetdeck: mpanjifa amin'ny tambajotra sosialy
K3B, Brasero: mpitam-boky kapila
Mount ISO tezitra: hametahana sary ISO amin'ny rafitray
Unetbootin: ahafahanao mametraka "rafitra" miasa amin'ny pendrive
ManDVD, Devede: Mpanoratra sy Famoronana DVD
Bleachbit: esory ireo rakitra tsy ilaina amin'ny rafitra
VirtualBox, Divay, Dosemu, Vmware, Bochs, PearPC, ARPS, Win4Linux: fanahafana ireo rafitra sy rindrambaiko miasa
Misy lalao an'arivony ary ho an'ny tsiro rehetra !!
Raha te hahita lisitra misimisy kokoa dia azonao atao ny mitsidika ny Fizarana programa an'ny bilaogy ity.
10. Vakio ny antontan-taratasy ofisialy
La Torolàlana ho an'ny mpampiasa ofisialy Ny Linux Mint dia tsy adika amin'ny teny Espaniôla ihany, fa izy io dia fanondroana tena ilaina amin'ny fametrahana sy ny fampiasana isan'andro ny rafitra.
Jereo ny rafitray vaovao
Efa manana rafitra miasa feno vonona hampiasaina isan'andro izahay. Toy ny mahazatra dia ampirisihina hizaha ireo mpitantana, ny safidy, ny fikirakirana ary ny fitaovana hafa ao amin'ny rafitra hahafantarantsika ny toetrantsika rehetra ao amin'ny rafitray.
Raha fintinina, miala sasatra ary mankafiza tombontsoa azo avy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Fantaro miaraka amin'izay ny fahatsapana fa tsy misy viriosy, efijery manga ary ferana amin'ny karazany rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 16 Petra
Salama Inona no tianao holazaina rehefa miteny ianao fa "programa sy fonosana maro no mifanentana be amin'ireo fizarana roa ireo"? Tsy ny fizarana rehetra ve mifanaraka amin'ny fonosana GNU / Linux rehetra? Manontany an'io aho satria heveriko fa mety hampisafotofoto ireo mpampiasa vao vao ity fanambarana ity.
Na inona na inona izany dia heveriko fa tena tsara ho an'ireo miditra amin'ny tontolon'ny Mint ity lahatsoratra ity.
Heveriko fa midika izany fa, na dia mifototra amin'ny Ubuntu aza ny Mint ary mampiasa ny toerana anaovany tahiry ho an'ny ankamaroan'ny rindrambaiko, mety misy fonosana iray izay apetrakao ao anaty Ubuntu fa tsy ao amin'ny Mint ary fiankinan-doha amin'ilay fonosana tiana hapetraka. . Fantatrao, mihodina ny fiankinan-doha.
Na izany aza tsy misy izay tsy voavaha ary ho an'ny ankamaroan'ny rindrambaiko dia tsy hisy ny olana.
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra! Tena ilaina ary, na dia ny Mint aza araka ny hevitro dia tonga voaomana tsara kokoa noho ny Ubuntu, tsy mampaninona mihitsy ny mahafantatra izany vaovao izany!
Marina izany ry havana. Tesla namely ny lakile. 🙂
maizina dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, fa ny tontolon'ny birao inona no hatolonao amin'ity kinova linux mint ity?
Mamaly an'i darkar
Kanelina raha manana GPU tsara sy MATE ianao amin'ny tranga mifanohitra amin'izany.
Ny fanavaozana dia tsara indrindra atao amin'ny mpitantana (ny sarin'ny ampinga), satria ny Mint mba hitazomana ny fitoniana ao amin'ny rafitra dia mametraka ny fanavaozana ary mamela anao hametraka hatrany amin'ny ambaratonga 3 fotsiny ianao. Raha manavao amin'ny alàlan'ny console ianao, dia mety hovaina ny rakitra sasany.
Mahaliana ... Tsy nanana izany fampahalalana izany aho! 🙂
DMYSYS dia hoy izy:
Toa nivadika safidy tsara i Petra, heveriko fa handrisika ny tenako hanandrana izany
Valio i DMYSYS
Eo alohan'izay! 🙂
Izaho dia mpampiasa Ubuntu 12.04, ary nametraka ny Mint Petra KDE aho, nanandrana azy roa andro aho ary tsy nisalasala namolavola ilay solosaina finday ary namela ny Mint fotsiny aho, mandeha tsara, mateza ary miaraka amina interface tsara loatra .
aioria dia hoy izy:
Nifindra tany amin'ny kanelina aho ary tena tiako izany ...
Mamaly an'i aioria
tutorial tsara dia nanampy ahy be
Luis Marquez dia hoy izy:
Fiarahabana sy fisaorana noho ny fandraisan'anjara, ny tiako hojerena fotsiny hoe ohatrinona ny fanohanana tavela amin'ity kinova ity ary rehefa mivoaka ny lts, ​​aiza no ahafahako mijery antsipiriany bebe kokoa momba izany
Misaotra anao ary miandry ny valinteninao tsara aho.
Valiny tamin'i Luis Marquez
Ny LM 16 dia hotohanana hatramin'ny Jolay 2014.
Diego Garcia dia hoy izy:
Tena tiako ilay fampahalalana.
Manana olana aho izay antenaiko fa afaka manampy ahy ianao.
Manana herinandro maromaro aho nanandrana nametraka linux mint 16, fa amin'ny fotoana saika nahavitan'ny fametrahana dia mahazo lesoka aho miaraka amin'ny angano milaza zavatra toy ny "nianjera ny installer" ary rehefa averiko indray ity dia nofafako ny grub izay manakana ny fanombohana miaraka amin'ny linux na win2 ananako amin'ny partition hafa.
Mahatonga ahy ho kivy izany satria isaky ny manandrana aho ary tsy mahomby dia mila mametraka Ubuntu 13 aho hamerenako ny baiko roa.
Niezaka ny nametraka mint tamin'ny usb mampiasa Yumi aho ary nandoro ny iso tamina dvd ary nitovy ny vokany. Omaly aho dia nisintona programa mpamorona lilia toa izany ary tamin'izay no nahatsapako fa nanimba rakitra ilay iso. na dia alainao amin'ny tranokala ofisialy aza izany.
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, tena te-hametraka linux mint amin'ny solosaina findainy hp g42.
Mialoha dia misaotra betsaka.
Mamaly an'i DiegoGarcia
Ity fanehoan-kevitra ity dia natao ho an'i Diego García, izay hitako mbola tsy nahazo valiny.
Raha, araka ny nolazainao, fa nanimba rakitra, na dia nisintona ny iso tamin'ny tranokala ofisialy aza ianao, dia jereo raha afaka miditra amin'ny solosaina hafa ianao handefasana azy ary handoro azy amin'ny kapila. Angamba amin'ity fomba ity ianao dia hisoroka ny lesoka, izay mety hitranga rehefa maka sary amin'ny solosainao. Sa misy olona fantatrao hamela kopia ho anao. Raha mitranga aminao hatrany io dia misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fitaovana (somary hafahafa).
Ary izao dia hevitra iray ankapobeny: hitako fa samy manana ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa ny ubuntu sy ny mint, miaraka amin'ny "tsy ananan'io mpampiasa io" ny drive. Avelao aho hanazava: raha mametraka namana linux mint "eo akaikin'ny" varavarankely $$$ (fizarana C: ho an'ny rafitra, fisarahana D: ho an'ny angon-drakitra), mamela ny rafitra miaraka amin'ny mpampiasa fampiasa automatique manana alàlana "standard" sy mpandrindra (nametrahako ny rafitra), ny namako dia tsy afaka miditra amin'ilay fizarazarana "D:" (ntfs) satria izy mangataka ny tenimiafin'ny mpitantana (izay tsy tiako homena azy mba tsy hanimba zavatra izy).
Efa im-arivo aho no teo ary tsy nahita fomba hanovana ny fahazoan-dàlan'ny fizarazarana "D:" amin'izay, satria tsy miakatra ho azy izy io, farafaharatsiny azonao apetraka rehefa te hanokatra azy ianao .
Raha ny hamonjy ny antontan-taratasinao manokana ao anaty lahatahiry anao no vahaolana dia tsy tiako izany: avy amin'ny varavarankely $$$ Fantatro fa ny data dia tokony ho lavitra ny fotodrafitrasa.
Talohan'izay dia tapaka ny fahazoan-dàlana nomen'ny mpampiasa tsirairay ary azo idirana mora foana. Roa ihany izao no azo atao: "fenitra" sy "mpandrindra" ... Raha izao ny mpampiasa mahazatra dia mila ny tenimiafin'ny mpitantana ... tsara isika!
(Avy any Badalona)
Talisman dia hoy izy:
Salvador, tsy maintsy mamorona hitsin-dàlana mankany D ianao ianao: ao anatin'ny fotoam-pivarotana ary apetraho ny teny miafinao. ao no manome alalana ny mpampiasa namanao hamono. Raha mbola tsy mety aminao io
afaka mamorona hitsin-dalana avy amin'ny kaontinao ianao ary manome alalana famonoana ho an'ny mpampiasa anao.
Eny, niasa ho ahy izy io tsy nisy olana tamin'ny kinova Ubuntu rehetra.
Mamaly an'i Talisman
Salama, vaovao aho amin'ny linux mint, vao avy nametraka azy aho ary nanampy betsaka ahy ity lahatsoratra ity, mijery ny pejy aho ary ny marina dia tiako be ilay izy.
Tsara izany! Faly aho fa manampy izany.
Gaston Barriga dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ity lahatsoratra mahasoa ity. Vaovao amin'ny Linux aho. Vao nametraka Linux Mint 16 tamin'ny solosaina findrako Lenovo 3000 N200 0769 taloha aho, toa mandeha tsara ny zava-drehetra afa-tsy ny WiFi; Tsy azoko atao ny miasa ny fifandraisana tsy misy tariby. Rehefa manokatra ny mpitantana ny mpamily aho dia mahita varavarankely poakaty aho, tsy misy lisitry ny mpamily na ny fitaovana, miaraka amin'ilay hafatra hoe "Tsy ampiasaina ireo mpamily tompony". Ny bokotra Miverina sy mampihatra fanovana dia tsy miasa. Ahoana no ahafahako mampihetsika ny mpanara-maso tsy misy tariby? Tena tiako ny fanampiana rehetra.
Mamaly an'i Gastòn Barriga
Amin'ny zavatra nofaritanao dia mety tsy maintsy ataonao "an-tanana" ... toy ny amin'ny Windows, na ny mitovy aminy.
Ho an'izay dia mila mametraka ndiswrapper ianao ary mahazo ny mpamily varavarankely amin'ilay karatra.
Ka mba mihoatra na latsaka ny hevitrao momba ny inona ilay zavatra, avelako rohy ianao (na dia mety tsy hitovy amin'ny anao manokana aza izany):
Loterana_Elsalvador_503 dia hoy izy:
fandraisana anjara tena tsara ho antsika izay nanomboka ny fifindra-monina ary nanapaka ny gadra hatrany amin'ny tsy miankina ka hatramin'ny fahalalahana dia fandraisana anjara tena lehibe fisaorana
Valio i luterano_Elsalvador_503
Abel lopez dia hoy izy:
Vaovao aho, nametraka Linux Mint tsy misy internet, tsy misy toerana onenako, inona no tsy maintsy ataoko izao? Nahazo trano sariaka mamela ahy hifandray aho, manavao azy ho azy sa tokony hataoko samirery? Miareta amiko, izaho dia dummy ... 82 taona ... maniry hianatra.
Valiny tamin'i Abel Lopez
Rehefa mametraka fonosana ao amin'ny linux mint 17.1 dia miteny amiko fa tsy nahomby ny fifandraisana amin'ireo repositories, ahoana no fomba hamahako azy?
Fany dia hoy izy:
Salama, mpankafy aho, ary tiako ho fantatra hoe iza amin'ireo rafitra miasa afaka manohana kanelina, izay mampiasa azy, ireo singa mandrafitra azy sy ny fampahalalana ankapobeny. Azafady, maika
Mamaly an'i FanY
Jaime Antonio Avila dia hoy izy:
Vaovao amin'ny rafitra fiasa sy izay mifandray amin'ny pc aho.
Ny fahalianana dia tonga satria mandalina ny sasany amin'ilay lohahevitra ary izaho
mendaron, jereo ny momba ny Linux Mint.
Tena tsara izany amiko, fa satria vaovao aho dia manontany azy ireo aho.
Tsy maheno ny cd ny pc-ko, tiako ho fantatra raha mila manova ny mpamaky aho
cd, na raha ny rafitry ny feo ary raha vitako ny manamboatra azy ireo amin'ny mpamily.
Misaotra betsaka, hatramin'ny manaraka ary antenaiko fa hanome valiny ahy ianao.
Valiny tamin'i Jaime Antonio Avila
toy ny acer ka ny linux mint 17 rebeca tsy manontany ahy matetika ny lakile
Lakile? Inona no lakile?
XMPP: serasera misokatra sy manerantany
jDirToText: ny rakitrao raha handefa hafatra